Khit Nay said...
ဖြစ်နိုင်တာတွေ ကာကွယ်ရမှာတွေ ကိုတွေ့လည်း
စိတ်ညစ်တယ် စိတ်အညစ်ဆုံးက ခုပေးထားတဲ့ add on link အတိုင်းသွားတာ file not found တဲ့
Add-on ကို install လုပ်ဖို့ ပထမဆုံး ဒီကို သွားလိုက်တာ မော်ဇီလာက အဲလိုပြန်ပြောနေတယ်ဂျ....။
နေတိုးတပ်တွေ လှမ်းခေါ်လိုက်ရတော့မှာလားဗျာ့ ဟိ ဟိ
မနော်၊ ဆင်ဒဏ်လား၊ ချစ်ညီကြီးသားထူး - ကိုယ်မှားသွားတာပါ လင့် အမှန်က http://www.mozilla.com/en-US/ ပါ။ ဆောရီးနော်..း)
မကေ - IE (Internet Explorer) အတွက်တော့ WOT Add-on ရှိပါတယ်။ ဒီမှာပါ - http://ww w.ieaddons.com/en/details/toolbars/WOT_For_Internet_Explorer/ - အဲကိုသွားပြီး IE အတွက် Install လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေသည့် NoScript တော့ မရှိသေးပါ။ ကျန်တဲ့ browser များအတွက်တော့ လိုချင်ရင် ရှာဖွေပေးပါ့မယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ မြေခွေးပဲ သုံးလို့အင်စတော လုပ်ဖို့ အဆင်ပြေတယ် အစ်ကိုရ။
FireFox က ပြောတယ် Time out တဲ့..
ဘာမှ ခိုင်းလို့ လဲ မရဘူး...
I had to delete my blogamonth ago. My blog burmasitmone.wordpress.com has gone and now trying to restart inanew domain name
Allow me to reproduce you post,in my blog.